मानिस माथि भिडियो
यो सेप्टेम्बर हामी छोटो फिल्म र एल्बममा भनिन्छ जारी “मानिस माथि” जवान मानिसहरू मानिसहरू हुन चुनौती. यहाँ को लागि एक संगीत भिडियो “मानिस माथि गान।” You can purchase the short...
त्यहाँ केही कुराहरू राम्रो भएका केही मानिसहरू हुन्. त्यहाँ बास्केटबल खेलाडी वर्ष र वर्ष को लागि लिगमा गर्ने प्ले छन् र तिनीहरूले करियर समाप्त धनी र सुखी. They wanted...
यहाँ म विश्वासी इंजीलवाद बारेमा यो वर्ष पहिले सिकाउनुभयो सत्र देखि अडियो छ. BragOnMyLord द्वारा विश्वासी इंजीलवादी समय छोटो ती लागि, यहाँ अंक को सारांश:5Characteristics of...
म किन विवाहित त्यसैले युवा प्राप्त गर्नुभयो?
हिजो म केही कुराहरू समातेर गर्न स्टोरमा लेट रात स्टप गरे र म कोषाध्यक्ष संग एउटा एकदमै रोचक कुराकानी भएको थियो. We made small talk as she scanned my...
मलाई संगीत मनपर्छ
अब त्यसपछि हरेक म पछाडि जानुहोस् र एल्बम र मलाई साँच्चै Artistically सारियो र आध्यात्मिक जब म तिनीहरूलाई सुनेको गीतहरू सुन्न. One of those albums is The Solus Christus Project by Shai...